जब घरमा पालेको बिरालोका कारण ‘ग’र्भवती’ भईन् श्रीमती ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/जब घरमा पालेको बिरालोका कारण ‘ग’र्भवती’ भईन् श्रीमती !
काठमाडौं । हामीले दिनहुँ जसो नै अचम्मका खबर सुन्दै र पढ्दै आईरहेका होलाउँ । यस्तै एउटा घ’टना अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । एक पाल्तु बिरालोका कारण श्रीमती ग’र्भवती बनेको भन्दै एक व्यक्तिले अनौठो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार श्रीमती ग’र्भवती हुनुको मुख्य कारण बिरालो भएको एक कपलले दाबी गरेको छ ।वास्तवमा बिरालोले क’ण्डममा प्वाल पारिदिएको कारणले श्रीमती गर्भवती बनेकी एक व्यक्तिले बताएका छन् ।
लकडाउनमा ग’र्भवती भईन् श्रीमती
उक्त व्यक्तिले आफू एक बच्चाको पिता भएको बताएका छन् । उनीहरुले लकडाउनमा बच्चा जन्माउने कुनै प्लान नबनाए पनि बिरालोले क’ण्डममा प्वाल पारिदिएपछि श्रीमती ग’र्भवती भएको बताएका हुन् । बाथरुममा राखेको क’ण्डम प्वाल पारिदिएपछि ग’र्भ भएको थियो । एजेन्सीको सहयोगमा